Xiisad ka dhex taagan mid ka mid ah masaajidada soomaali maamusho ee Göteborg | Gaaloos.com
Home » News » Xiisad ka dhex taagan mid ka mid ah masaajidada soomaali maamusho ee Göteborg
Mid ka mid ah lookalada masaajid ahaanta loo isticmaalo ee ku yaala magaaladda Göteborg, gaar ahaan xaafadda Biskopsgården ee degmadda Hisingen, ayaa xiisad xoogan ka dhex taagan tahay gudiga iyo maamulka masaajidka maamullo.
Arrintan ayaa salka ku heeysa markii mid ka mid ah gudiga lugu eedeeyey in been abuur ka sameeyey shirka sandalaha ah ee gudiga qabsato. Wargeyska Gothenburg ayaa qoray isagoo soo xiganayo dacwad lugu soo oogay imaamka la sheegay in buun abuur ku sameeyey barataoolka shirka. Dhinaca kalena Sh Yuusuf oo ah imaamyada mid ka mid ah masaajidada Göteborg ku yaala, oo ah ka mid ah shaqsiyaadka magaciisa la isticmaalay ayaa wargeeyska u sheegay in xilligaas shirku dhacayey aanu joogin magaaladda ee uu ku maqnaa magaaladda Oslo ee Noorweey magaciisana laga been abuuray.
Maamulka gobolka ee dhaqaalo ahaan taakuleeya masaajidka ayaa ka goostay dhaqaalihii uu bixin jiray, sababo la xirriira is qab qabsi halkaasi horey ugu jiray. Dhinaca kale xubno ka tirsaan jiray maamulka dugsiga ayaa haatan shaaciyey in imaanka oo lugu magacaabo C/qaadir uu ku tagri falayo awoodiisa imaam ahaaneed, waxaana ay qaarkood sheegen in wejiyo badan oo adeegsanayo.
“Waxaanu ku daalnay labo wajiileeynta, iskuuladda iyo maaulka degmada markeey noqotana weji kale ayaa la tusayaa, xubnaha masaajidkana weji kale, booliska iyo degmadabu uma qaadan cabashadeena mid dhab ah, waxaana dacwad ka gudbinay sanadkii 2014-tii” ayuu yiri Cali Maxamed oo u waramayey wargeyska.
Xasan Ismaaciil oo isagana ka mid ah dadka sida weyn u dhaliilsan imaamka oo isna geestiisa ka hadlayey ayaa sheegay in imaamku dhalinyaradda iyo dadka kula taliyo ineeysan dacwad ka gudbin falal dambiyeedka iyo tacadiyada la geesto haddii sidaas la yeelana lala kulmayo ciqaab.
“Dadka iyo dhalinyarada ayuu kula taliyaa ineeysan dacwad ka gudbin falal dambiyeedka iyo tacadiyada, waana arrin halis ah, haddii imaamku sameeyo qalad iyo dembi waa in la dacweeya waana ku taaganahay talaabadeena” ayuu yiri Xasan. Ma ahan markii ugu horeeysay oo is qab qabsi dhexdooda ah ka dhaxeeyo masaajidkaas ay soomaalidu maamusho. Xiisadan ayaa soo jiitameeysay muddo aad dheer iyadoo madjidkuna ahaa mid loo adeegsado goob quraanka lugu baro carruuraha. Balse dheacdooyinkii ugu dmabeyey ayaan la ogeyn saameynta uu ku yeelan doono mustaqbalka fog. Muuqaal fiidyoow ah oo qudbadii jimcaha ee bishii nofeembar baxday laga soo xigtay bartiisa facebook-ga imaamka ayaa iyadana dood kale dhalisay, taasoo oo loo arkay ineey tahay mid uu ku aamusinayo kooxaha ku kacsan.
Title: Xiisad ka dhex taagan mid ka mid ah masaajidada soomaali maamusho ee Göteborg